राजतन्त्र फाल्यौं, समस्या फालिएन ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
राजतन्त्र फाल्यौं, समस्या फालिएन !
ती सज्जनको कुरा सुनेपछि मेरो मनमा एउटा प्रश्न आयो – के हामी हाम्रा पूर्वराजदूत महोदयहरूलाई कुनै गाउँको स्कुलमा पढाइरहेको भेटौंला ? अथवा हाम्रा नेताहरू, मन्त्रीहरू वा सचिवहरू आफ्नो अवकाशपछि जनताको जीवनसँग जोडिएर कुनै गाउँमा सेवाका काम गरिरहेका देख्न पाइन्छ ?
आफ्नो मन्तव्यमा ती डेनिस बारम्बार एउटै वाक्य दोहोर्‍याउँथे – ‘यस्तो छ हाम्रो लोकतन्त्र।’ उनीहरूको लोकतन्त्र गजबको छ – परिणाममुखी, उदार, कल्याणकारी र समतामूलक लोकतन्त्र। उनीहरू मार्क्सवादी होइनन्। तर उनीहरूले निर्माण गरेको राज्य धुरन्धर मार्क्सवादीहरूको समाजवादभन्दा माथि देखिन्थ्यो। अझ महत्त्पूर्ण कुरा, उनीहरूको लोकतन्त्रमा जनताको स्वामित्व छ। अलिकति राजनीतिक कुरा सुरु हुनासाथ डेनिसहरू आफ्नो लोकतन्त्रप्रति गर्व गर्थे र दोहोर्‍याउँथे – ‘दिस इज आवर डेमोक्रेसी।’ मान्छेसँग कुरा गर्दा देखिन्थ्यो – उनीहरू खुसी छन्। सामाजिक न्याय, सुशासन, जनतालाई अधिकतम लाभको सुनिश्चितता, लोककल्याणकार र सेवाभाव उनीहरूले निर्माण गरेको राज्यको मुख्य चरित्र हो।